Isikhumba seengxaki singabangela inkathazo eninzi kubanikazi bayo: i-pores eyandisiweyo, ubude bomhlaba, iimpumlo, i-acne, i-foli foci - konke oku kunokwenza ixesha elide lichithe isimo sengqondo sabasetyhini kunye namadoda, okwenza bazive bekhuselekile. Ngokuqhelekileyo, iingxaki ezinjalo zivela ebuntwaneni kwaye zikhokelela ekutshintsheni kwazo iimpawu ze-hormonal emzimbeni. Kodwa ukuba unyango olufanelekileyo lwesikhumba alukho, ngoko kwiminyaka ingadlukiswa. Ngenxa yoko, kukho iziqholo ezahlukeneyo, kodwa banceda ukulahla ezinye zeempawu. Ngoko ke, ukuphucula ngokuphawulekayo imbonakalo yesikhumba kufuneka isebenzise izixhobo ezizodwa ukuphathwa kwesikhumba sengxaki ebusweni.
Siyabulela kwimiphumo evuselelayo yokuvuselela kwesikhumba, ukusetyenziswa kwe-retinoid bekude kudumile. Ziyakhuthaza ukuveliswa kwesikhumba se-collagen, ngelixa zibanceda ekulwa ne-acne kunye ne-skin rashes. Umgaqo wezenzo zabo uyimpembelelo kwiinuclei zeeseli zesikhumba kwiindawo ezithile zokufumana i-receptors, ezikhokelela ekuphelisweni kwezinto ezibangela ukuba kubonakale ukubonakala kwe-acne. Ukunciphisa ukukhutshwa kwe-sebum nokuguqula ukubunjwa kwawo, i-retinoids inciphisa kakhulu umngcipheko wokuvuvukala.
Mafutha e Retinoic
Ioli yama-retinoic inegalelo ekunciphiseni ukuveliswa kwe-sebum, ukususwa kweenkqubo ezivuthayo, akubandakanyi ukuba kubekho izikrakra ze-post-acne, i-comedones kunye ne-cystic formations. I-ointment inomphumela wokuqhafaza, oko kukuthi, ukususa ubuncwane be-epithelium, kunceda ukunciphisa ubungakanani beengqungquthela ezixhambileyo, kuphucula ukukhutshwa kwamatope abo, kwaye kukhuthaza ukuhlaziywa kweeseli zesikhumba. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwamathambo e-retinoic kuvunyelwe kuphela emva kokubonisana kunye nokuqeshwa kwe-dermatologist, ngubani omele akhethe i-regimen yonyango.
Ezi zixhobo zezilwanyana zokubuyisela i-retinoid, njenge-embryotoxicity kunye ne-teratogenicity, azibandakanyi ithuba lokusebenzisa kwabo ngexesha lokukhulelwa kunye noomama abancinci. Kwiveki yokuqala yokusetyenziswa kwamathambo ama-retinoic, i-aggravation ye-acne ingenzeka, ebonakaliswa ngesikhumba, kubonakala kwintsholongwane entsha kunye nokukhishwa kwesikhumba. Kwiintsuku ezimbalwa, iimpendulo ezinjalo kufuneka zidlule, emva koko, kwiimeko ezininzi, imeko yesikhumba iphucula kakhulu, ngelixa isiphumo sihlala sizinzile. Enye yemiphumo emibi yeoliyo ingabangela ukukhanya kwelanga, ngoko kuyacetyiswa ukuba ngexesha lokunyanga, ixesha elincinane lichithwa elangeni.
Eli phephelo lisebenza kwakhona kwiqela le-retinoid, kodwa linomsoco wesimanje kunye nemiphumo embalwa yecala. U-Ada Palen unesenzo esiphezulu, esilwa-anti-medogenic kunye nesenzo esichasayo. Nangona isilwanyana sinomlinganiselo omncinci wemiphumo emibi, asikacetyiswa ukuba uyisebenzise kubamama abakhulelweyo nabangelusi.
Iqela lesibini learhente kwesikhumba sengxaki kubandakanya izidakamizwa ezichasayo kunye nezichasayo. Into eyenzayo yenzo ayilwa ngokuthe ngqo kunye ne-acne, kodwa isiphumo kwizizathu zokubonakala kwazo, oko kukuthi, ukuvuvukala kunye neebhaktheriya. Ukusetyenziswa kwezidakamizwa ezichasene nezidakamizwa zineziphumo ezintle kunye nezimbi. Impembelelo ebonakalayo ibonakaliswe ekunciphiseni ukuqhuma okuvuthayo, nangona kunjalo, ukucima i-microflora ye-pathogenic, amalungiselelo e-antibacterial abhubhise i-flora efanelekileyo, ekhokelela ekunciphiseni ukukhuseleka kwesikhumba.
I-Zinerite isilwanyana esidibaniseneyo kunye ne-erythromycin-zinc esiyinkimbinkimbi kwaye ivela kwiqela lama-antibiotic macrolide. Esi siza sineempembelelo ezichasayo kunye ne-antibacterial kwesikhumba sengxaki, kunceda ukunciphisa ukugcinwa kwe-sebum kunye nenani lamachashaza amhlophe namnyama.
Eli qela leziyobisi ekwenzeni unyango olunengxaki luquka iDalatsin, Epiderm, iBenzamycin kunye nabanye. Kwakhona, ungayisebenzisa kuphela emva kokubonisana nodermatologist, omele aphuhlise i-regimen yonyango.
Ukuzivocavoca ubuso kunye nentamo
Unyango lwamaqanda angapheliyo kunye nezilwanyana zomntu
Siphumelela ngempumelelo izinga lokuzithemba kwethu
Luhlobo luni lwabantwana ababa ngamasela?
Iiseli ezinomdla zomntu, inkcazo, iimpawu
Iholide eParis ngeeholide zikaMeyi
Imenyu yasehlobo iphoqelekile isisu
Soufflé kwiifama ezihlaza
Ukunciphisa isisindo ngenzuzo